Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitry ny fiarovam-pirenena : Manao zinona ny tsy miaramila
Minisitry ny fiarovam-pirenena : Manao zinona ny tsy miaramila
Mbola ambentin-dresaky ny mpanara-baovao maro hatrany hatreto ny trangan-javatra tany Midongy Atsimo, tamin’ny faran’ny herinandro teo, izay tsy inona akory fa ny fanafihan-dahalo hatramin’ny 300 lahy ka nandroba omby an’arivony, an’ny vahoaka ary nisian’ny fahafatesan’olona teo amin’ny fifandonan’ireo dahalo tamin’ny mpitandro ny filaminana sy ny fokonolona. Raha tsiahivina dia roa ny mpitandro ny filaminana namoy ny ainy, voatifitry ny dahalo tamin’izany, ary nisy 19 ny avy amin’ny fokonolona.
Nanaitra ny maro ny tenin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard, raha nidina tany an-toerana izy tamin’ity herinandro ity. Nambarany fa “tsy maintsy ho tratra ireo dahalo”. Iny aloha tsy olana. Fa rehefa niteny momba ireo namoy ny ainy ny minisitra dia akory ny hagagan’ny maro fa navahin’ingahy Minisitra ireo mpitandro ny filaminana namoy ny ainy, ary nasandrany ny voninahitr’izy ireo, fa ireo fokonolona nanao vy very ny ainy ka lavo kosa dia sanatriavin’ny vava, “matimaty foana toy ny valala nosamborim-boka”, hoy ny ohabolana hafahafa izay.
Tsy nila voninahitra na nomena galona akory ireo fokonolona lavon’ny dahalo fa ny fitenenan’ny minisitry ny fiarovam-pirenena hoe “tsy avela ho raraka an-tany ny ran’ireto miaramila lavo” no nanaitra. Samy lavo izao na ny miaramila na ny fokonolona ka nahoana no ireo miaramila ihany no nambara hoe “tsy avela ho raraka an-tany ny ain’izy ireo”? Angaha fatin’alika, sanatriavin’ny vava, ny an’ireo fokonolona lavo no tsy mba nasiana fitenenana kely akory na indraim-bava aza?
Fihetsika sy fiteny tsy toa inona toa izany no mahatonga ny olom-pirenena hisalasala amin’ny mpitondra fanjakana indraindray, ary hatramin’izay io fa tsy ny ankehitriny ihany. Indraindray koa dia ny teny tsy ambina toa ireny no mahatonga ny olom-pirenena hankahala ny mpitondra. Antony iray no nahafaty an’ireo fokonolona sy ireo miaramila, ary toerana iray no nitrangan’ny fahalavoana, nefa dia nasongadina manokana ireo mpitandro ny filaminana fa ny fokonolona kosa, natao zinona.